I-CRM yeNtlalontle: Imidiya yokuncokola kunye noLawulo loBudlelwane baBathengi
I-eBook yasimahla: Ukufudukela kwiCRM yeNtlalontle
NgoLwesibini, Meyi 31, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ulawulo lwaBudlelwane nabaThengi sisitshixo kwimibutho emininzi, ukubanika ulwazi lwabathengi kunye nedatha abayifunayo ukugcina ubudlelwane obuhle kunye nabathengi babo. Ukubeka imithombo yeendaba zentlalo ngaphezulu kwemisebenzi yobudlelwane babathengi kunokukhawulezisa ukusebenza kwenkampani yakho kunye nokwakha ubudlelwane obuqine kakhulu- okukhokelela kumathuba amaninzi okunxibelelana nabathengi ngaphandle kweenkqubo ezisesikweni kunye nokwakha uluntu.
Umbono nge-imeyile usandula ukukhupha i-CRM yeNtlalontle yeeDummies, incwadi yasimahla eya kuthi incede iinkampani ziqonde umahluko phakathi I-CRM yeNtlalontle kunye neCRM kunye nendlela yokuphakamisa intlalo kwiinzame zabo zeCRM.
Ukusuka kwincwadi: Imithombo yeendaba zentlalo kunye nothungelwano lutshintshe uqoqosho lwehlabathi lwaba yinto efana nendawo yentengiso yedolophu encinci, apho i-buzz yoluntu, hayi ukuthengisa nge-buzz, emisela ukuba amashishini ayachuma okanye ayahluleka. I-CRM yeNtlalontle yindlela yokuphendula ngobuchule kule ndawo intsha yoshishino. NgeCRM yeNtlalontle:
Ugxininiso kuluntu kunye nokwakha ubudlelwane.
Ukuhamba ngeendawo zentlalo, kubandakanya u-Facebook kunye no-Twitter, abathengi ngabanabo kunye nolawulo lwencoko.
Unxibelelwano lishishini-ukuya-kubathengi kodwa kunye nabathengi-kubathengi kunye nabathengi kwi-future.
Umthengi usebenzisana namashishini ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo ukuphucula iimveliso, iinkonzo kunye namava abathengi.
Incoko ayicwangciswanga kwaye ayisiyonyani, kwaye isuka kwintetho yentsingiselo ukuya kwintetho yoluntu.
I-eBook ibonelela ngalo lonke ulwazi oluyimfuneko-ukusuka ekwakheni isicwangciso-qhinga, ukukhetha itekhnoloji elungileyo, indlela yokuphakamisa itekhnoloji, ukuqeqesha abasebenzi bakho, ukulinganisa iziphumo-yonke indlela yokuthintela imigibe eqhelekileyo.
Ukuxelwa ngokupheleleyo: Ndifumene ingxelo yangaphambi kokukhutshwa kwe-eBook kwaye ndibhale isincomo sayo. Umbono nge-imeyile ikwangumthengi we DK New Media .
SmartDocs: Lawula iMicrosoft Word Repository
Agasti 10, 2011 ngo-7: 58 PM
Inqaku elihle! I-CRM yentlalontle ngokuqinisekileyo inyukile kwaye inyukile. Ngaba uvile ngeGreenRope? Ikuvumela ukuba ulawule i-CRM yakho nayo yonke into kwideshibhodi enye.